Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.5.5 ကျင့်ဝတ် Be
ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ဖို့တိုကျတှနျးခကျြဤစာစောင်၌ရေးထားသောအားလုံးသုတေသနသက်ဆိုင်သည်။ အခန်း 6-အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ကျင့်ဝတ်များပိုမိုယေဘုယျကိစ္စများအပြင်အချို့သောတိကျတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပေါ်ထွန်းစေနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းလူမှုရေးသုတေသနဒါအသစ်ဖြစ်၏ကတည်​​းကဒီပြဿနာတွေကိုပထမဦးဆုံးမှာအပြည့်အဝသိသာမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အားလုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများအတွက်, လျော်ကြေးနှင့်ချေးငွေ၏ကိစ္စများရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောလူများကသိက္ခာမဲ့လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အ Netflix နဲ့ဆုအပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာမျှလျော်ကြေးလက်ခံရရှိကြောင်းစဉ်းစားပါ။ Relatedly, အချို့သောလူများကသိက္ခာမဲ့ Micro-task ကိုအလုပ်သမားစျေးကွက်အပေါ်လုပ်သားများပိုက်ဆံ၏အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာပေးချေရန်စဉ်းစားပါ။ ခရက်ဒစ်၏နောက်ဆုံးပြဿနာစာတမ်းများ၏ရေးသားခဲ့သောဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့စီမံကိန်းတွေကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုယူ, ဒါပေမယ့်တချို့စီမံကိန်းတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ၏အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များမှရေးသားခဲ့သောအကြွေးပေး, ဥပမာ, ပထမဦးဆုံး Foldit စက္ကူ၏နောက်ဆုံးစာရေးဆရာ "Foldit ကစားသမားတွေ" ခဲ့ (Cooper et al. 2010) ။
ပွင့်လင်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းလည်းသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် privacy အကြောင်းရှုပ်ထွေးတဲ့မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Netflix ဟာလူတိုင်းအတွက်ဖောက်သည်ရုပ်ရှင် ratings ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် ratings ထိခိုက်မခံတဲ့ပုံမပေမဲ့သူတို့က, ဖောက်သည်များပြည်သူ့စေရန်သဘောတူမသတင်းအချက်အလက်ဖောက်သည် '' နိုင်ငံရေးအရဦးစားပေးရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်အကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်ပါတယ်။ အ ratings ဆိုတိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်မရနိုငျအောငျ Netflix နဲ့ဖယ်ရှား-ခွဲခြားသတ်မှတ်ဒေတာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ပတ် Netflix ဟာအချက်အလက်များ၏လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း de-အမည်ဝှက်နားမှာ Narayanan and Shmatikov (2008) (အခန်း6ကိုကြည့်ပါ) ။ ထို့ပွငျ, ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းအတွက်, သုတေသီများသူတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူအကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်းနိုင်။ ဥပမာ, မာလာဝီဂျာနယ်များစီမံကိန်းများအတွက်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ခေါင်းစဉ် (အေအိုင်ဒီအက်စ်) အကြောင်းစကားဝိုင်းသင်တန်းသားများ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲကူးရေးသောခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုကျင့်ဝတ်ပြဿနာများ၏အဘယ်သူမျှမကျြောလှားနိုငျသော်လည်း, သူတို့တစ်တွေပရောဂျက်၏ဒီဇိုင်းကိုအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ကိုသတိရပါ, သင့် "လူစုလူဝေး" လူမျိုး၏ဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏။